सबैले बिर्सिएका नेपाली संगीतका एक 'त्रिमूर्ति'
अम्बर गुरुङ शुरूदेखि अनि गोपाल योञ्जन र जितेन्द्र बर्देवा चाहिँ पछि गएर बहुमुखी नेपाली सङ्गीत स्रष्टा बने। आफूले रोजेको बाजा बजाउन शुरू गरे, गीत गाउन थाले, मेलोडी रच्न थाले, आफ्ना सबै सङ्गीत संयोजन गरे र सार्वजनिक मञ्चमा प्रस्तुति दिए।
‘योञ्जन परिवारमा अम्बर गुरुङप्रति चरम घृणाभाव र पिटर जे. कार्थकप्रति द्वेषभाव देखियो’
उहाँहरूको टिप्पणीबाट एउटा कुरा प्रष्टसित प्रकट भएको छ: त्यो हो अम्बर गुरूङप्रति योञ्जन परिवारको चरम घृणाभाव र मेरो बुवा कार्थकप्रतिको द्वेषभाव, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्छु। नत्र ‘तिललाई पहाड’ बनाएर दिवङ्गत व्यक्ति उपर यस्तो विवादास्पद विचार पोख्ने अशोभनीय काम उहाँहरूबाट हुने थिएन।
नाल्मा गाउँको बेग्लै रामायण लमजुङ, नाल्मा गाउँका आइतमान बिकले गाएर सुनाएको रामायणको कथाका कतिपय पात्र र चरित्र वाल्मीकि रामायणसँग पटक्कै मेल खाँदैनन्। वानर सेना, मन्थराको उपस्थिती नभएको बरु शिवजी भेटिएको रामायणको रचना किन र कसरी सम्भव भयो त?
महान् मोचार्ट, जसको शव बाटैमा छाडेर मलामी फर्के अंग्रेजी मितिका हिसाबले नारायणगोपालको निधन डिसेम्बर ५, १९९० मा भएको थियो । संयोग, यही दिन डिसेम्बर ५, १७९१ मा अस्ट्रियाका महान् संगीतज्ञ मोचार्टको देहान्त भएको थियो । तर, त्योभन्दा पनि महासंयोग त यिनै नारायणगोपालले यूरोपका दुई शताब्दी पुराना प्रतिभालाई सम्झेर लेख नै लेखेका रहेछन् । नारायणगोपालको दुर्लभमध्येको एक लेख ।
अष्ट्रेलियाबाट निर्जन रिजालको र्‍याप 'अर्थ' सार्वजनिक
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवा निर्जन रिजालको समूहले र्‍याप विधाको गीत 'अर्थ' को म्यूजिक सार्वजनिक गरेको छ। निर्जनले गीतमा अहिले युवा पुस्ताले गुजारीरहनु परेको समय र उनीहरूको सोचलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले दियो र्‍याप गायक भिटेनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत पाटनले र्‍याप गायक भिटेनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। फौजदारी कसुरमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्न पक्राउ गर्न सक्ने भएपनि गीतसंगीतको विषयमा भिटेन (समीर घिसिङ)लाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ।
सज्जा चौलागाई बनिन् तेस्रो नेपाल आइडल तेस्रो सिजनको नेपाल आइडल सज्जा चौलागाइँ बनेकी छन्। टेलिभिजन फ्रेन्चाइज नेपाल आइडलमा प्रविण बेडवाल र किरणकुमार भुजेललाई पछि पार्दै सज्जा नेपाल आइडल बनेकी हुन्।
सुशान्त सिंहको मृत्यु छानविन गर्न सीबीआईलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्यु सम्बन्धी सबै कागजात सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसन (सीबीआई)लाई हस्तान्तरण गर्न भारतको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराजको निधन ९० वर्षीय पंडित जसराजको अमेरिकाको न्यूजर्सीस्थित निवासमा बिहान ५ः१५ मा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले समाचार संस्थाहरुलाई जानकारी गराएका छन्।
‘राम्दी पुल तरने बित्तिकै, बाँचे भेट मरे त यत्तिकै’ माछीकाँडे डाँडाजस्तै मुग्धकारी यी हाम्रा लोकभाकाहरूले खेतबारीमा काम गर्दा शिरमाथि लाग्ने टन्टलापुर घाम बिर्साउँछन्, माकुरीजाल झैं कलात्मक यी भाकाले हिउँदका लामा अँधेरी रातहरू काट्न सहयोग गर्छन् ।